Apple wuxuu ku casuumayaa macOS macruufka Big Sur inay adeegsadaan Safari 15 beta | Waxaan ka socdaa mac
Sidaad horeyba u ogayd haddii aad raacdo warka Apple iyo gaar ahaan Mac, in shirkadda Mareykanku soo bandhigtay nooc cusub oo Safari ah oo leh macOS Monterey. Safari 15 Beta waa la heli karaa haddii aad tijaabineyso nooca cusub ee software-ka ah ee Mac ah, si kastaba ha noqotee, Apple waxay dooneysaa inay wax yar ka sii fogaato waxayna ku dhiirrigelineysaa isticmaaleyaasheeda inay isku dayaan shaqadan sidoo kale haddii ay leeyihiin macOS Big Sur iyo Catalina.
Ku socota isticmaalayaasha qaarkood aad uma jecla qaabka safari cusub ee macOS Monterey. Noocaan Safari 15 Beta waa laga saari karaa oo lagu celin karaa kuwii hore. Isticmaalayaal badan ayaa ka cabanayay qaar ka mid ah isbeddelada la sameeyay sidaa darteed, waxay noqon kartaa taas Apple waxay ku dhiirigalinaysaa dadka isticmaala inay isku dayaan qaabkan cusub ee biraawsarka ugu caansan. Waxay ku dhiirrigelinayaan ku rakibidda noocyada 'macOS Big Sur' iyo noocyada 'Catalina', ma ahan oo keliya Monterey lafteeda.
Xusuusnow in shaqeynta ee - ku midee barta cinwaanka barta tabka, qarinaya badhamada kala duwan ee interface ugu weyn. Sidoo kale, maamulka tabs-ka ayaa si weyn isu beddelay, taas oo ka careysiisay adeegsadayaal badan, sidaan horay kuugu sheegnay.
Waxaad horeyba u ogayd inay jirto nooc ka mid ah Sahaminta Farsamada Safari Technology. Si kastaba ha noqotee, sii deynta Safari 15 waa nooc beta caadi ah. Haa runtii, loogu talagalay isticmaaleyaasha la xushay ee barnaamijka AppleSeed.
Nasiib darro ma jirto waddo aad iskaga diiwaan gelin karto barnaamijka AppleSeed, maaddaama Apple ay si aan kala sooc lahayn u doorto isticmaaleyaasha ay shirkaddu ku martiqaadeyso inay tijaabiyaan barnaamijka beta. Martidu waxay heli doonaan emayl leh faahfaahinta si ay ugala soo baxaan Safari 15 beta Websaydhka AppleSeed.
Haddii aad ka mid tahay kuwa la doortay, fadlan noo sheeg sida ay wax u dhaceen Iyo sidee noocaas cusub u socdaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » MacOS Big Sur » Apple waxay ku martiqaadeysaa macOS macruufka Big Sur inay u isticmaalaan Safari 15 beta
Maalintii khamiista waxay ka muuqatay Mackayga inaan haysto cusboonaysiinta Safari. Waan cusbooneysiiyay wixii markaas ka dambeeyayna si sax ah uma shaqeeyo. Bogga wuu rartaa laakiin wuxuu sheegaa inay dhibaato ka haysato, mar labaad ama laba jeer ayuu dib u rartaa, ka dibna waxaa soo baxaya farriin qalad ah.
Waxaan tirtiray Kukiyada iyo kordhinta la xannibo. Waxaan furay bog gaar ah ... Ma aha mid go'an.
Waxaan haystaa Safari 15.0 oo qofna iima qorin ama ogeysiiska nooca Beta.
Ka jawaab Torricelli
MacOS Monterey beta 4 oo leh Live Live oo loo heli karo Intel iyo M1 Macs